Aretina Drepanocytose Ny 10 %-n’ny Malagasy no fantatra fa voany
HJRA Ampefiloha Olona 2.500 nahazo fitsaboana maimaimpoana
Tontosa soa aman-tsara ny sabotsy lasa teo tetsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha ilay hetsika “dia zone” nokarakarain’ireo zone miisa efatra eo anivon’ny fikambanana Lions Club dia ny zone 13, 31, 32 ary 33 entina hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka.
Aretina iray mahafaty ka mila fanaraha-maso akaiky ny drépanocytose. Ny 10 %-n’ny Malagasy no fantatra fa voany ankehitriny.
Aretin’ny tsy fahampian’ny ra izy io, miteraka fanaintainana be amin’ny vatana sady manimba ny taova haingana. Raha ny fanazavan’ny profesora Oliva, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny hopitaly HJRA dia amin’ny alalan’ny fitiliana ihany no hahafahana mamantatra ity karazan’aretina iray ity. Tsy mifidy taona izy nefa azo tsaboina tsara, raha tsy tara loatra ny fahatongavan’ilay marary eny anivon’ny tobim-pitsaboana. Mba hahafahana mijery akaiky ity aretina iray ity sy ny fomba hahafahana mitsabo azy dia tanterahina etsy amin’ny Carlton nanomboka omaly alarobia 13 jona ilay atrikasa iraisam-pirenena andiany fahafito aty Afrika afovoany. Tanjona ny hahafahan’ireo manampahaizana maro eto an-toerana sy avy any ivelany mijery manokana ny mikasika ireo gene marary anatin’ny vatan’olombelona lasibatry ny drepanocytose iray ka hahafahana mitsabo haingana ny aretina, hisorohana ny fahafatesana. Anisan’ny manohana akaiky ny ady hatao amin’ity aretina iray ity ny orinasam-pifandraisana Airtel. Olona manodidina ny 3 tapitrisa hatreto no efa nanaovan’izy ireo fanentanana manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny asa tanterahiny. Tsiahivina moa fa mbola tena lafo sady ilana dingana maro ny fitsaboana ny aretina drepanocytose. Anisan’ireny ny fanaovana analyse, ny fitarafana, ny fandidiana miankina amin’ny fivoaran’ilay aretina.